सिद्धार्थ शुक्लाको मृ’त्युपछी अस्वस्थ रहेकी ‘हिना खान’ ले गरिन यस्तो पोष्ट , को हुन् हिना खान ? – eSidhakura
मुख्य पृष्ठअन्तरास्ट्रियसिद्धार्थ शुक्लाको मृ’त्युपछी अस्वस्थ रहेकी ‘हिना खान’ ले गरिन यस्तो पोष्ट , को हुन् हिना खान ?
बिग बोस शो भारतभर प्रख्यात छ। मानिसहरु यसलाई ठूलो उत्साह संग हेर्छन्। यस शो मा आउने हरेक प्रतियोगी शो मा साथ साथै व्यक्तिगत जीवन मा राम्रो मित्रता छ। आज हामी सिद्धार्थ शुक्ला र हिना खान को मित्रताको बारेमा कुरा गर्दैछौं।
हिना आफ्नो मिलनसार ब्यवहारको कारण सबैभन्दा राम्रो हुन्थिन्। तर यदि हिना बिग बोस मा एक विशेष मित्रता थियो, तब उनी सिद्धार्थ संग थिए। हिनाले यस्तो असल साथीले संसार छोडेको दु: ख बिर्सन सकेकी छैनन् , र यसकारण, उनको स्वास्थ्य पनि बि’ग्रेको छ।
सिद्धार्थ शुक्लाको हालै ४० वर्षको उमेरमा हृदयघातका कारण नि’धन भएको थियो। उनको मृत्यु पछि, उनीसँग काम गर्ने धेरै मानिसहरु गहिरो स्त’ब्ध भएका छन्। जसमा एक हिना खान पनि छन्। हिनाले यस्तो राम्रो र घनिष्ठ मित्र गु’माएपछि धेरै नराम्रोअवस्था बाट गुज्रिरहेकी छिन ।
उनले यस्तो अवस्था ट्वीट गरेर आफ्नो अवस्था बारे बताएकी छिन् ।‘मेरो विगतको अनुभव र व्यक्तिगत पछि, म एक घनिष्ठ मित्र गु’माएकी छु। म डराएको छु र दुखी छु। म ठिक छैन र राम्रो महसुस पनि गरिरहेको छैन । म पनि तपाइँ जस्तै यो सदमे बाट बाहिर निकाल्न कोसिस गर्दैछु।
हिनाले सामाजिक सञ्जालमा आफ्नो पीडा यसरी व्यक्त गरिन्, “हामीलाई लाग्छ कि हामीले हाम्रो खट्टा र मीठो अनुभवहरु बाट जीवन जान्न थाल्यौं। तर जीवन को अ’प्रत्याशित तरिका मा बाहिर आउन को लागी एक तरीका छ। म सिद्धार्थको परिवार प्रति स’मवेदना व्यक्त गर्दछु। तपाइँहरु सबैले शा’न्ति को लागी प्रार्थना पनि गरुन्। ”